ဦးပိစိမူးဖူးတယ်… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဦးပိစိမူးဖူးတယ်…
Posted by ကြောင်ဝတုတ် on Nov 15, 2012 in Creative Writing, Short Story, Think Different | 29 comments
ကျုပ်နာမည် ပိစိ… မိသားစုထဲမှာ အညှက်ဆုံးမို့ ပိစိလို့နာမည်ပေးထားပေမယ့် အသက်လေးလဲရလာရော… ထင်သလောက်မသေးခဲ့ပါဘူး…
အသက်လေးလဲ နဲနဲရလာတော့ လူတွေကကျုပ်ကို ဦးပိစိလို့ခေါ်ကြတယ်…
ကျုပ်ဘ၀မှာ အရက်သောက်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံမူးတတ်တာကလွဲရင် သူများကိုဒုက္ခမပေးဖူးလို့ အပေါင်းအသင်းတွေကချစ်ကြတယ်…
မူးရင် ဘယ်တော့မှမရစ်ဘူး… စကားပြုံးပြုံးကြီးပြောပြီး ခင်စရာတောင်ပိုကောင်းလာတယ်လို့သူများတွေက ပြောကြတယ်…
တစ်ခါတစ်ရံ ယောင်္ကျားပီသအောင် ကွမ်းစားကြည့်ဖူးတယ်… သိပ်မကြိုက်ဘူး…
လောင်းကစားလေး တစ်ခါတစ်ရံလမ်းကြုံရင် ကစားတယ်… ကံဇာတာကအရမ်းကောင်းတော့ စွဲသွားလောက်အောင်တစ်ခါမှမနိုင်ဘူး…
နောက်ဆုံးတော့ ဘယ်အချိန်သောက်သောက်မူးတတ်တဲ့ သစ္စာရှိတဲ့အရက်ကိုပဲသောက်ရတယ်…
တကယ်ကို မူးတဲ့အရသာကိုနှစ်သက်မိသွားတော့… ဦးပိစိမူးအောင်မျိုးစုံလုပ်ဖူးတယ်…
ဘ၀မှာ အရက်သောက်ပြီးမူးတာထက် ပိုပြီးမူးတဲ့နည်းလမ်းအသွယ်သွယ်ကို သုံးခဲ့ဖူးတယ်…
(၁) ဦးပိစိ ကားတာယာကို မီးရှို့ပြီးမူးဖူးတယ်….
(၂) ဦးပိစိ PVC ကပ်တဲ့ကော်ရှုပြီး မူးဖူးတယ်….
(၃) ကိုယ့်ဂျိုင်းမွှေးကိုယ်နှုတ်… မီးရှို့ရှုရင်း မူးဖူးတယ်….
(၄) ဘုရားပွဲမှာ ရဟတ်ကို တစ်သောင်းခွဲဖိုးစီးပြီး မူးဖူးတယ်….
(၅) ပူစီပေါင်းတစ်လုံးဝယ်ပြီး နားထင်ကြောထောင်အောင်မှုတ်ပြီး မူးဖူးတယ်….
(၆) ရေ လီတာ (၂၀)ကို တစ်ထိုင်ထဲသောက်ပြီး မူးဖူးတယ်….
(၇) အိမ်ရှေ့နဲ့ နောက်ဖေး ဂျွမ်းထိုးအသွားအပြန်လုပ်ပြီး မူးဖူးတယ်….
(၈) တစ်မိသားစုလုံးခရီးသွားနေတဲ့ကောင်မလေး အိမ်ရှေ့မှာ ခေါက်တုံ့ခေါက်ပြန်လျှောက်ရင်းနဲ့ မူးဖူးတယ်….
(၉) တိုင်တစ်လုံးမှာ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ကြိုးနဲ့ချည်ထားပြီး အကိုက်သန်တဲ့ခွေးကိုစပြေးရင်း မူးဖူးတယ်….
အဲဒီလို အမူးနည်းပေါင်းမျိုးစုံနဲ့ အသစ်အစမ်းတွေမျိုးစုံထွင်ပြီးတော့ ဦးပိစိမူးဖူးတယ်…
လောကကြီးမှာ အရက်သောက်မူးရင် လူတွေကသိပ်အထင်သေးကြတယ်….
အရက်သမားဆိုပြီး နှိမ်ချင်ကြတယ်…. ဦးပိစိကတော့ အသစ်အဆန်းစနစ်တွေနဲ့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်မူးအောင်ကြံတယ်… ဘယ်သူ့မှဒုက္ခမပေးဘူး….
နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့…. ” ဦးပိစိမူးဖူးတယ်”….
ဘာပြောချင်တယ်ဆိုတာကို ဖမ်းလို့မရဘူး ၀တုတ်ရေ…။
အူးပိစိက အူးဗိုက်ထက် သာသွားပြီ
အချစ်ကြောင့် မူးတာလေးက တော့ အရသာ သိပ်ရှိမယ်ထင်တယ်
မူးဖူးတယ် … ဟေ့ … ဖတ်ပြီး မူးနိုင်တယ် …. ခိခိခိ
အားဂိုဂျီး … အဲ့ အူးပိစိကိုကြောပေးဘာ … မူးချင်ယင် အိမ်ဂို ကြွဘာယို့ … ။
တမီး တူယေးကို ဆယ်မိနစ်လောက်ပဲ လာကျိ ….. မမူးတွားလျှင် ဂျိုက်တာ လိုက်ကျွေးမယ် … ခွိခွိ ။
အဟမ်း။ ဒါဆို မိန်းမ ယူလိုက်။ မိန်းမ က လိုချင်တာတွေ စာရင်းချပြလို့ အဲ့ စာရင်းကို ကြည့်ပြီး မူးရတာ အဆိုးဆုံးပဲ။
ဘာဘရီလေးလိုချင်တယ် စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်။ :harr:
အဆောင်တုန်းက ဆေးချချင်တဲ့ကောင်ကို သတိရတယ်… တောင်ငူ (၁၀)တန်းကျောင်းသားတွေ လက်တည့်ဆန်းတဲ့အရွယ်ဆိုတော့ ဆေးချတယ်… ခက်တာက ဟိုလိုဆေးချတာမဟုတ်ဘူး အိမ်သုံးဆေးတွေကို တွဲသောက်တာ တွဲလုံးခေါ်တာပေါ့…. ထင်တာတော့ အဆိပ်ဖြစ်ပြီးမူးတယ်ထင်ပါ့….
မူးပြီး ရီလည်လည်ဖြစ်နေပြီတော့ ကောင်းတယ်ပေါ့ အဲဒါကို တောင်ငူက အောင်အောင်ဆိုတဲ့ကောင်လေးက သူများတွေဆေးချတော့ သူလဲချချင်တာပေါ့ကျုပ်တို့က အဲလိုမကောင်းတာလုပ်ပေမယ့် ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်နိုင်တယ်…. သူက မရဘူး အဲဒီအပြင်သူက ဘာလုပ်လိုက်တာဆို လိုက်ပြောသေးတယ်… ကံဆိုးရင် အဆောင်ကအထုတ်ခံရမယ်.. အဖေအမေတွေသတ်ရင် သေမယ်…. အဲဒီတော့ သူ့ကိုပေးမလုပ်ချင်ဘူး မရမက ဆေးချချင်တယ်ဆို အတင်းတောင်းတော့ သူငယ်ချင်းက
ဆေးအဖြူနှစ်ပြားပေးလိုက်တယ်… သောက်ပြီးသွားအိပ်တော့တဲ့…. ဟိုတစ်ယောက်ကလဲ
သောက်ပြီးတော့ သွားအိပ်ရှာတယ်… ခဏနေတော့ ဆေးပေးလိုက်တဲ့သူငယ်ချင်းက
ကျုပ်ကိုလာခေါ်တယ်… သွားကြည့်ရအောင်တဲ့ .. သွားလဲကြည့်ရော… သကောင့်သားက ဒေါင့်လေးကပ်ပြီး မျက်လုံးလေးဆင်းလို့ .. ကျုပ်ကလဲ မနေနိုင်လို့ ဟေ့ကောင်အခြေအနေလို့ မေးလိုက်တော့
ဘာပြန်ပြောတယ်မှတ်တုန်း.. ကောင်းတယ်တဲ့… တက်နေတယ်တဲ့…. ကျုပ်လဲ နဲနဲတော့ အံ့သြတယ်…
အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းက ပြန်မယ်ဆိုပြီးတော့ ပြန်လာတော့လမ်းမှာ.. ကျုပ်က မေးတယ်…
ဘာတွေတိုက်လိုက်တာလဲဆိုတော့ သာရာဆပ်တဲ့ .. ၀မ်းပိတ်ဆေးနှစ်ပြားသောက်ပြီး တက်တဲ့ဆေးသမား ကျုပ်တစ်သက်တစ်ခါပဲမြင်ဖူးတယ်… နောက်နေ့ကျတော့ ၀မ်းချုပ်လို့တဲ့… ဆေးချရင် ၀မ်းချုပ်လားတဲ့ဆိုပြီး လာမေးတော့မှ.. ရယ်လိုက်ရတာဗျာ….
တီးရှော့ထဲက အကိုကြီးပြောပြတာ .. မူးတဲ့အကြောင်းပဲ
ဒီဇာတ်လမ်းက အိုက်ကစတာပဲ ဟီးဟီးး
ဦးပိစိ မမူးဘူးသေးတဲ့ နည်းအသစ်ခလေး ပျချင်လိုက်တာ။
ကျွန်တော်ချစ်ခင်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းကြီးတစ်ယောက်အတွက် အမှတ်တရရေးထားတာမို့ ဘာမှမရည်ရွယ်ပါဘူးဗျာ…
ခင်ဗျား ရွာထဲပတ်မူးနေတာ ဦးပိစိကို မမီဘူးမဟုတ်လား… သူ့ထက်သူလူစွမ်းကောင်းတွေချည်းပဲနော်…
ဦးပိစိနဲ့ ကြုံရင်ဦးဗိုက်ကို မိတ်ဆက်ပေးပါဦးမယ်… တူတူမူးကြပေါ့ဗျာနော့…
ဦးပိစိက အချစ်ကြောင့်မမူးလောက်ဘူးဗျ… တစ်ယောက်သောသူစကားနဲ့ပြောရရင်ဖြင့် သူ့ဗိုက်ထဲမှာ ချစ်တတ်တဲ့ကလီစာပါမလာဘူးတဲ့…ဟိဟိ
ဦပိစိအတွက် တူလေးကြည့်မူးနည်း အမှတ် (၁၀) ပေါ့နော်…. ဦးပိစိဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရေးမှတ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်…
ဟို အိုင်းစတိုင်းလည်း မှားခဲ့တာဘဲ ။ အရစ္စတိုတယ်လည်း မှားခဲ့တာဘဲ။ အက်ဒီဆင်လည်း မှားခဲ့တယ်။
နာတို့ ဦးပိစိလည်း မှားခဲ့တယ်။ အနော်လည်း မှားခဲ့ဖူးတယ်။
ဦးပိစိလည်း မူးခဲ့ဖူးတယ်။ အနော်လည်း မူးခဲ့ဘူးတယ်။ အရက်သမားတိုင်း မူးခဲ့ကျတာဘဲ..။
ဆေးခြောက်သုံးပြီး မော်ပြူးခဲ့ အဲ မူးပျော်ခဲ့တယ်။
ဒိုင်ယာဆီပင် သောက်ပြီး မူးတယ်။
တိတော့ဝူး ဗျာ ဘ၀ မှာ မူးတာတွေများလွန်းလို့ မူးခဲ့တာဘဲသိတော့တယ်။
သုံးဆယ်တစ်ဘုံမှာ တစ်ခါမက မူးဘူးတဲ့ အာဂ
ဦးကျောက် ကတော့ အမူးပြေဖူးတယ်
ဂဇတ်ရွာသား အသားဖြူဖြူ အကိုကြီးက ဦးကျာက်ကို “ခင်ဗျားနဲ့အိပ်မယ်” ပြောတဲ့ညက……
အဟဲ မူးချင်ရင် နောက်တစ်နည်း၊ ပက်စီထဲ အချိုမှုန့် ထည့် ….. အချိုးတော့ပြောမပြဘူး….ဟီးဟီး
ဘာသွားလုပ်တာလဲ ဟိုက လုမယ်မှတ်လို့ ဖုန်းဆက်လိုက်မှ မမူးပဲ စခန်းရောက်သွားနေအုန်းမယ်
ယမကာလေး မှီဝဲသုံးဆောင်ပြီး ရီတီတီလေးဖြစ်နေတဲ့ ရဿ လေးကို
မူးယစ်ထုံထိုင်း တဲ့ဝေဒနာဆိုးတွေနဲ့ မှားပြီးအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ထားတဲ့အတွက်
ယမကာ မှီဝဲသုံးဆောင်သူတစ်ဦးအနေဖြင့် ဒီပိုစ့်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ပါပြီး
နောင်အခါ ယမကာ ကိုမူးယစ်ထုံထိုင်းစေတဲ့အရာလို့ အဒိတ်ဘယ်သက်ရောက်စေတဲ့
အပြောအဆို အပြုအမူ များကိုလည်း တတ်နိုင်သလောက်ရှောင်ရှားဘာလို့
ယမကာကို မူးယစ်ထုံထိုင်းစေတဲ့အရာလို့ပြောရင် အားကြီးစိတ်ဆိုးတယ်
ညာမူးတယ် တွေဆိုတာ ယမကာကို မှီဝဲသုံးဆောင်ပြီးခံစားရရှိလာတဲ့
ရဿ ဝေဒနာ လေးနှင့် လုံးဝ မတူညီဟုဆိုဂျင်ဘာဂျောင်း
ကိုဝတုတ် ရေ ဒီ ညနေ တကယ် မူး နေပြီး ဗျ
မျက်လုံး အားနည်းတာပဲလား မသိ ၊ ဒီ ရက်ထဲ စာဖတ်ဖြစ်တာလဲ များတော့
ဇတ်ကြောတွေ တက်ပြီး မူး နေကြောင်းပါ
ဦး ပိစိ ရော ဒီ လို မူး ဖူးလား မသိ
ဟုတ်တယ် ကျမလည်း မျက်မှန်များ တောင်းပြီလား မသိဘူး မူး မူးနေလို့ စိတ်ညစ်တယ်
ှုဦးမာဃကတော့ နတ်သမီးတွေ ရေရင်းနဲ့ မျက်စိလည်ပြီး မူးဖူးတယ်
မင့်ဘွလဲ မူးတာတွေသိပ်များသလား ဦးပိစိနဲ့အပြိုင်ပေါ့လေ…
နောက်တစ်ခါဦးပိစိကိုတွေ့ရင်မေးဦးမှ… အဖေ့လက်သီးနဲ့ မူးဖူးလားလို့….
အမူးပြေသွားတယ်ဘဲဖြစ်ရလား… အမှန်က မူးမူးနဲ့မှားလိုက်ရမှာ… ဟိဟိ
ဦးပိစိရဲ့မူးပုံမူးနည်းကိုပဲပြောတာပါ… နောက်ကြုံရင် အဘပုကန့်ကွက်ကြောင်း ဦးပိစိကိုပြောလိုက်ပါ့မယ်…
သတိတော့ထား ဘပုရေ… ဖုန်နှစ်လုံးပြီးရင် ကျန်တဲ့နှစ်လုံးပါပျောက်သွားဦးမယ်… တယ်လီဖုန်း
ဦးပိစိလဲ မျက်မှန်သမားမို့ မူးဖူးမယ့်ပုံပေါ်ပါတယ်…
မျက်လုံးကြီးတွေနီရဲပြီး မူးတတ်တာမျက်နှာကြီးလဲနီလို့… ဦးပိစိမူးရင်ပြောပါတယ်…
မျက်လုံးနီတာ မျက်စိအစာကျွေးတာများလို့… အဲ… မျက်စိနဲ့အလုပ်လုပ်တာများလို့…ထင်ပါ့
နင်မူးပုံမူးနည်းကို နည်းသစ်အဖြစ် ဦးပိစိကိုပေးလိုက်ပါ့မယ်နော်…
အဲဒါဆို သိပ်မမူးလောက်တော့ဘူး… ဥပမာ… ၂င/၄၃၂၁ ဆိုတာမျိုးပေါ့…
ဦးပိစိကတော့ မပင်မပန်းဘဲ မူးရမယ်ဆိုရင်ဖြင့် သွေးတက်ပြီးမူးရင်တောင် ဆေးသောက်မယ့်လူမျိုး မဟုတ်ဘူးထင်ပါ့… ဟိ… ဦးပိစိက အသက်သိပ်မငယ်တော့ဘူး… ကျွန်တော့်ထက် ၅နှစ်မကကြီးတယ်…
သူလဲ မကြာခင် သွေးတိုးပြီးမူးလောက်မယ်ထင်ပါ့…
ကမ္ဘာစစ်တုန်းက ဂျာမန်သုံ့ပန်း စစ်သားတယောက်ကတော့
အစာအိမ် အင်ဇိုင်းတမျိုးက ဂျုံကို အချဉ်ဖောက်တဲ့ ဓါတ် ပါနေလို့
ထောင်ထဲမှာ ပေါင်မုန့်စားရင်း အားနေ မူးနေကြောင်း ဖတ်ဖူးပါတယ်..
အူးပိစိမူးဖူးတာတွေကလည်း များပါ့တော် … မူးနည်းလည်း စုံပါ ဒါပင်မယ့်
(၃) ကိုယ့်ဂျိုင်းမွှေးကိုယ်နှုတ်… မီးရှို့ရှုရင်း မူးဖူးတယ်…. ဆိုတာကတော့ ရွံစရာကြီးတော်
ကြံကြံဖန်ဖန် မူးနီးပဲ ….
နန်းချင်ဇယာဂလေးနဲ့ စုံတွဲသီချင်းဆိုပစ်မယ်…ဒါဗျဲ..ဂေ့..အေ့ အေ့..
အရက်ဆိုတာ အနံ့လေးလဲရမှ… ပြင်းရှရှအရသာလေးလဲခံစားဦးမှ… မဟုတ်ရင်မူးရုံနဲ့ သိပ်အဓိပ္ပာယ်တော့မရှိသလိုပဲ….
အဲဒီကိစ္စက ဆေးဖက်ဝင်တယ်ဆိုလား ကြားဖူးတယ်… ဆေးနည်းလေးနဲနဲလွဲနေရင်တော့မသိ…
မဒမ်မိုက်က အိမ်ပြန်ပြီးအရင်လာဆိုပါဦးတဲ့… ငရုတ်ကျည်ပွေ့နဲ့စောင့်နေပါတယ်တဲ့လေးမိုက်ရေ…
ညက အွန်လိုင်း ဂိမ်းတွေ လိုက်ဆော့ပီး ညဉ့် ၂နာရီကျော်မှ ဒီနေ့ ရီဝေေ၀ မူးနောက်နောက်ဖြစ်နေတယ်
ကွန်မန့်တွေ ဖတ်ပြီး ကြည့်ပြီး မူးတွားပီ …
အခုလိုမူးကြောင်းတွေချရေးပြထားတာ အကြောင်းတစ်ခုခုတော့ရှိရမယ် ဆိုပြီးထိုင်စဉ်းစားနေတာ မူးလိုက်တာ။
ဦးပိစိကြီးက မူးနည်းမျိုးစုံ မူးဖူးဘာဒဂါး …
တကယ် မလွယ်တဲ့ လူကြီး …
ဒါနဲ့ စာရေးသူရော အဲ့လို မူးဖူးလား သိချင်ဒါ …
ဒါမှ မဟုတ် နာမည် ပြောင်းပြန် လှန်ဂျီးလား ..
– ဂဇက်က comment တွေ တစ်သီကြီးတက်တဲ့ အငြင်းအခုံဖြစ်စေတဲ့ ပို့စ်တစ်ပုဒ်ကိုသာ
တစ်ထိုင်ထဲ ဖတ်လိုက်ပါ… :hee: